AKHRISO: Musharraxiinta Garabka Mucaaradka ee Maamulka Galmudug oo kubaaqay in – Kismaayo24 News Agency
AKHRISO: Musharraxiinta Garabka Mucaaradka ee Maamulka Galmudug oo kubaaqay in
by admin 29th January 2020 0119
Afarta musharrax ee ugu saameynta badan doorashada Madaxweynaha Galmudug oo xalay kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ayaa ka arrinsaday xaaladda cakiran ee doorashada maamulkaasi.
Musharraxiintaan oo kala ah: Cabdiraxmaan Maxamed (Odowaa), Kamaal Daahir Guutaale, Cabdullaahi Faarax Wehliye iyo Cabdi Dheere ayaa shirkooda ka soo saaray saaray War-murrtiyeed ku aadan xaaladda cakiran ee ka taagan gudaha Dhuusamareeb.
Ugu horreyn afarta musharrax ayaa dalbaday in muddo 15 cisho ah la hakiyo howlaha dhismaha ee haatan ka socda magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo.
Sidoo kale qoraalkooda ayey ku sheegeen in loo baahan yahay in la qabto shirweyne deg deg ah oo ay isugu imaanayaan saamileyda siyaasadeed ee maamulkaasi, gaar ahaan dhinacyada wasaaradda arrimaha gudaha, madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, baarlamaanka, Ahlu Sunna iyo musharraxiinta u taagan hoggaanka Galmudug.
Sida ay sheegeen musharraxiintaan oo horay u qaadacay doorashada shirka ayaa waxaa diirada lagu saari doono khilaafaadka hareeyey Galmudug oo sababay inay saddex dhinac loo kala qeybsamo, kuwaas oo midba dhiniciisu wado dhismaha maamul gaar ah.
Warsaxaafadeedkaan ayaa ku soo aadaya, iyadoo maanta ay ku beegan tahay waqtigii loo asteeyey hadal jeedinta musharraxiinta u sharraxan hoggaanka mamaulkaasi.
Xaaladda ayaa u muuqata mid sii cakirmeysa, waxaana shalay degmada Dhuusamareeb looga dhawaaqaday xildhibaanada saddexaad ee baarlamaanka Galmudug.
SAWIRRO: Xildhibaanada kooxda Ahlu-Sunna oo lagu arkay Kalfadhigii maanta ee.
DAAWO: Madaxweynaha Maamulka Puntland oo khudbad ka jeediyey Shirweynaha Beesha.
Sawirro: Shirka IGAD oo Muqdisho ka Furmay iyo Arimaha Socdaalka Viso la’aanta oo Diiradda lagu saaraayo
admin 11th February 2018 11th February 2018
Ciidamada Huwanta ah oo Baardheere Kaabiga ku Haya iyo''''''''''''''''''
admin 19th July 2015 27th August 2015
Dhagayso:- Muxuu Kala Hadlay Madaxda Gal-Mudug michal keating
Tifaftiraha K24 16th February 2016